Ukutshintshela okanye ukusuka kwi-Airport yaseBasel & Zurich | Inkonzo yaseSwitzerland
Ukuthunyelwa kweBasel yeNkonzo, inkonzo yakho yokufuduka okanye ukusuka kwiivenkile zeenqwelo-moya zaseBasel naseZurich. ESwitzerland.
Amanani alungileyo aqinisekileyo, sibize ngaphandle koxanduva okanye sisebenzise ifom yoqhagamshelwano ngezantsi.
Myalelo ngoku kwaye uhlawule emva kokuhamba.
YOPHANDO / UKUZE
(Siza kuphendula ngexesha le1.)
Ngaba ufuna ukuhanjiswa kweedrafti kuBasel okanye kwiZurich? Emva koko silindele ukuva kuwe.
Sidibanisa intuthuzelo yenkonzo enetekisi ethembekileyo ngesimo esihle sothutho oluhle lweenkonzo zethu ze-limousine.
Siyakukuvuyela ngokukuqhuba ukufaka umthwalo kwi-Airport yeBasel okanye nayiphi indawo eSwitzerland. Uyakwamkeleka ukuba usixelele ngefom yoqhagamshelwano umntu oyifunayo.
umzekelo iBasel City Airport Basel Chf 40.-
Ukuthunyelwa kweenqwelo-moya zokuqala kunye nokuthengwa kweenqwelomoya kwiBasel naseZurich
Inkonzo yethu yokuthutha kwinqanaba le-moya kwi-Airport yaseBasel ikuthatha ngokukhawuleza kwaye ngokukhuselekileyo kwi-plane okanye ubuyele kwisixeko. Ikakhulukazi kwisikhululo se-sikhumulo sezindiza zihlala ziqatha kwaye zihamba rhoqo, ziyazi indlela yokukhangela indawo yokupaka kwi-moya. Thina njengeenkampani zeteksi zikunikezela isisombululo kunye nenkonzo yethu yokuthunyelwa kwe-shuttle ukuya ngokukhululekile kwaye ngokungahambisani nokulawula ukuhamba kwisikhululo-moya.
Ukuthunyelwa kweenqwelo-moya ngeteksi ukuya kwisikhumulo sezindiza
Ukongeza, sinokuqhubela kwezinye iindawo eSwitzerland naseFransi naseJamani. Nangona i-Airport yaseBasel inkulu, ayisoloko inikezela uxhulumaniso lwendiza olufunwayo. Kungaba luncedo ukususela kwisikhumulo sezindiza. Sikuzisa kwiZikhululo seZurich okanye kumazwe angumakhelwane ngaphandle kwengxaki, umz. Kwisikhumulo sezindiza eStuttgart okanye kwisibhabatho saseYurophu saseFrankfurt am Main.
Qhagamshelana nathi ngokukhwela ngabanye, nokuba uyahamba ngasese kunye neeholide eSwitzerland, okanye uhamba nge shishini eSwitzerland kwizoshishino.
Yethu iteksi inkonzo
Uhlala eBasel kwaye unqwenela ukuba inkonzo yethu yokuthutha i-shuttle Isikhululo seBasel Airport Ncwadi? Akukho nkathazo, sithwala abantu be-7 kwibhasi yeeteksi enye ngexesha elifanayo kuquka umthwalo ukuya kwisikhululo seBasel, iZurich, Geneva okanye ngaphandle. Sikuzisa ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza kwi-moya yakho.
Inkonzo yabasebenzisi kunye neenkampani
Siphinde silandele iiprojekthi zeenkampani ezinkulu, abasebenzi bakho ngumzekelo kwihotele eBasel kwaye kufuneka badlulele kwelinye idolophu, umzekelo Zurich, Okanye kufuneka uhambe rhoqo kwaye uhambise indlela enye imihla ngemihla eBasel. Siyiqabane lakho elifanelekileyo kwizothutho kubaxhasi benkampani eSwitzerland kunye nokuthunyelwa kwe-moya.
Senzele okanye usithumelele i-SMS kwaye ubuze amaxabiso ethu athile esiwazinikelayo.
I-Basel yakho yokuthutha inkonzo yaseBasel.
Ukuhanjiswa kweeNkonzo eziNzuzo:
Ingaba umntu we-1 okanye abantu be-7, bahlala bexabiso elifanayo
Elula Zurich Airport, IBasel, iGeneva kunye nokuhamba kwamanye amazwe
Azikho iindleko ezifihlakeleyo, onke amaxabiso ahleliweyo
Akukho ntlawulo xa uhlawula ngekhadi lekhredithi
Umlingani okhuphiswano kunye nenkonzo
Sisityelele kwinombolo elandelayo: